10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ပတ်ရန်လှပသောရှေးဟောင်းမြို့များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ပတ်ရန်လှပသောရှေးဟောင်းမြို့များ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 06/02/2021)
အလှဆုံးသဘာဝတရားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, အချိန်အားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, များမှာ 10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ရန်အလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့များ၏. တရုတ်နိုင်ငံ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှေးဟောင်းမြို့များမှဥရောပတစ်လွှား, ဒီခရီးစဉ်ဟာအလယ်ခေတ်ကနေကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အထိပုံပြင်တွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ဥရောပမှာစျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်.
1. ဥရောပသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်လှပသောမြို့ကြီးများ: Civita Di Bagnoregio, အီတလီ
1200 အသက်အနှစ်, မူရင်းနှင့်အတူပြန်ခြောက်ရာစုမှစတငျ, Civita di Bagnoregio သည်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် ဥရောပရှိလှပသောမြို့. သင်ဤရဲတိုက်ကိုကောင်းကင်၌တွေ့လိမ့်မည် 110 ရောမမြို့မှကီလိုမီတာ, တစ် ဦး တောင်စောင်းပေါ်တွင်အနားယူ. နွေရာသီမှာဒီလှပသောကျောက်တုံးကြီးကိုသင်လည်ပတ်လျှင်, သင်ဖွယ်ရှိသည့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ် 100 Viterbo ပြည်နယ်၏မော်ကွန်းအမြင်များကိုခံစားရန်ပြန်လာသောနေထိုင်သူများ.
ထို့အပြင်, သငျသညျမွို့က၎င်း၏ထားရှိမည်ကြောင်းကိုကြည့်ဖို့ကအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့လိမ့်မယ် အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ ပြီးနောက်2ကမ္ဘာစစ်, နှင့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများစွာ. ထို့ကြောင့်, ဒီအီတလီကျောက်မျက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်, ထွက်အသေခံထံမှစောင့်ရှောက်ခြင်း. ဒါကြောင့်, ကပျောက်ကွယ်သွားမီသင်သင့်ပါတယ် Viterbo သို့ရထားစီးပါ, သင်၏နောက်အီတလီအားလပ်ရက်တွင် Rome Termini မှဖြစ်သည်.
ရောမတစ် ဦး ရထားနှင့်အတူ Viterbo သို့
ရထားနှင့်အတူ Orvieto မှ Siena
Arezzo to Train With Orvieto သို့သွားသည်
Perugia မှ Orvieto သို့ရထားနှင့်အတူ
2. ကမ္ဘာလှည့်လည်ပတ်ရန်လှပသောမြို့ကြီးများ: Rothenburg ဟောငျးမြို့, ဂျာမနီ
ဂျာမနီမှာဘယ်အချိန်မှာသင် Romantic လမ်းမလျှောက်သွားသင့်တယ်, တစ်ဦး 40 မိနစ်များ’ အကြားမောင်း အလှပဆုံးကျေးရွာများ ဂျာမနီမှာ. သင်ထဲကတစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ပတ်ရန်လှပသောရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများ, Rothenburg.
Rothenburg ob der Tauber တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မှော်အလယ်ခေတ်မြို့ Bavaria ၌တည်၏, ဂျာမနီ. ၎င်း၏ထက်ဝက်ကြာသည့်ငါးပိအရောင်အိမ်များသည်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောမြို့ရိုးနောက်ကွယ်မှအချိန်ကာလအားဖြင့်မပြောင်းလဲသေးပါ. Tauber မြစ်အထက်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်သာယာလှပသည့်ရှေးဟောင်းမြို့တော်သည်၎င်း၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်, celts များအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ, အဖြစ်စောစော 1st ရာစု C.E အဖြစ်. Rothenburg ရဲ့ Plonlein, Markt စတုရန်း, လမ်းကြား, နှင့် Castle ဥယျာဉ်သည်ဥရောပသို့အလည်အပတ်ခရီးအသွားများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, နှင့်ကမ္ဘာ၌တည်၏.
ရထားနှင့်အတူဘာလင် Rothenburg Ob Der Tauber မှ
Stuttgart မှရထားနှင့်အတူ Rothenburg Ob Der Tauber သို့
မြူးနစ်သည်ရထားနှင့်အတူ Rothenburg Ob Der Tauber သို့
Frankfurt မှ Rothenburg Ob Der Tauber သို့ရထားဖြင့်သွားမည်
3. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအဆင်းလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့: တရုတ်ပြည်ရှိ Fenghuang
ဖီးနစ်ရှေးဟောင်းမြို့, Fenghuang သည်တရုတ်ပြည်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအရှိဆုံးရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. သင်လှပသောမြို့သို့ခြေလှမ်းသောအခါ, တံတားများ၏အံ့ sight ဘွယ်သောမျက်မှောက်, ဘုရားကျောင်း, ပြီးတော့ရေပေါ်ရှိသက်ရှိများသည်သင့်အားသူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြလိမ့်မည်, ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်သဘာဝတရားကြားတွင်.
၏သမိုင်းနှင့်အတူ 400 နှစ်ပေါင်း, မင်နှင့် Qing မင်းဆက်များ, Fenghuang, တရုတ်နိုင်ငံသည်မမေ့နိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. တရုတ်၌ဤရှေးဟောင်းမြို့နှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာတစ်ခုမှာမြို့ရဲ့နေထိုင်သူများဖြစ်ပါတယ်, Miao နှင့် Tujia တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ, သစ်သားအိမ်ဟောင်းများအတွင်းခေတ်မတိုင်မီကဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်.
4. နန်ကျင်းရှေးဟောင်း, တရုတ်နိုင်ငံ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးရှေးဟောင်းမြို့ရိုး, နန်ကျင်း, Yangtze မြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်. နန်ကျင်း အဆိုပါတစ်ခုဖြစ်သည်4တရုတ်ပြည်ရှိရှေးဟောင်းမြို့တော်. ဖြည့်စွက်ကာ, နန်ကျင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့လည်ပတ်ရန်လှပသောရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ယင်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောမြို့ရိုးသည်ရပ် နေ၍ မြို့ကိုဝိုင်းရံထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, အချိန်နှင့်သမိုင်းအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းကစောင့်ရှောက်ခြင်း.
သို့သျောလညျး, နန်ကျင်း၏အထင်ရှားဆုံးအမြင်များမှာညအချိန်တွင်ဖြစ်သည်. မှောင်မိုက်ပြီးနောက်, တစ်ခုလုံးကိုမြို့ lit ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကွန်ဖြူးရှပ်ဘုရားကျောင်းပို။ ပင်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, မင်း Ming မင်းဆက်မှအခြားအထင်ကရနေရာများသို့သင်လည်ပတ်နိုင်သည်, 14 ရာစု၌တည်၏. ဥပမာ, Sun က Yatsen ရဲ့ Mausoleum.
5. ဥရောပသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်လှပသောမြို့တော်ဟောင်း: Avignon, ပြင်သစ်
၁၄ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဗိသုကာအဗင်းနွန်မြို့ဟောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်. ဤသည်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်မြို့တော်သည်ပုပ်ရဟန်းမင်းများ၏နေအိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်, နှင့်သင်သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းမှပိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလေးစားဖို့’ gothic နန်းတော်. နန်းတော်ကိုနှစ်သက်ပြီးတဲ့နောက် Avignon ဘယ်ဘက်ကမ်းခြေနားမှာလှပတဲ့ Rhone မြစ်ကမ်းနားမှာလှေစီးပြေးသွားနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျော်ကြားသော Saint-Benezet တံတားကိုကြည့်ပါ, 12 ရာစုကနေ.
ရှေးဟောင်းမြို့လယ်ခေါင်သည်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသည့်တောင်တန်းများနောက်ကွယ်တွင်ကောင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသည် 39 မင်္ဂလာပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျတနင်္ဂနွေ Avignon သွားရောက်ကြည့်ရှုဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် တနင်္ဂနွေခွေးလှေးစျေးကွက်, သို့မဟုတ်နွေရာသီကာလအတွင်း, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကျော်ကြားသော Avignon ပြဇာတ်ရုံပွဲတော်သို့တက်ရောက်ရန်ကံကောင်းလိမ့်မည် “တွင်” နှင့် “သွား” ဇူလိုင်လမှာ.
ပါရီမှရထားနှင့်အတူ Avignon ရန်
ရထားနှင့်အတူ Avignon မှ Nice
Marseilles မှ A Train With Avignon သို့
6. ဥရောပသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်လှပသောမြို့တော်ဟောင်း: အသုံး
ရင်ခုန်စရာ, အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော, နှင့် 14 ရာစုဗိသုကာနှင့်အတူ, Bruges သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့ဟောင်း, အသုံး ချောကလက်ဆိုင်များ, စျေးကွက်, တံတားများ, နှင့်အလယ်ခေတ်သမိုင်းဝင်စင်တာကိုဆွဲဆောင် 8 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသန်း visitors ည့်သည်.
ထိုကွောငျ့, ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မည်, နှင့်ဒေသခံနှင့်အတူရောနှောပါ 120,000 ဒေသခံများက. ဒါကြောင့်, ရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေသည်ရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေဘယ်လ်ဂျီယမ်ရှိဤလှပသောရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသည့်နတ်သမီးပုံပြင်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
အမ်စတာဒမ်ကိုရထားနှင့်အတူ Bruges မှ
ဘရပ်ဆဲလ်တစ်ရထားနှင့်အတူ Bruges မှ
Antwerp တစ်ရထားနှင့်အတူ Bruges မှ
တစ်ရထားနှင့်အတူ Bruges မှ Ghent
7. တရုတ်ပြည်သို့လှပသောမြို့ကြီးများ: Luoyang, တရုတ်နိုင်ငံ
Longmen Grottos နှင့် Shaolin ဘုရားကျောင်း, သာဖြစ်ကြသည်2Luoyang ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိထင်ရှားသောရှေးဟောင်းမြို့တော်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိစေသည့်နေရာများ၏. သငျသညျတရုတ်iverseာ Luoyang ရှေးဟောင်းမြို့၏ဗဟိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ပေကျင်းနှင့် Xi'an အကြား, ကျည်ဆံရထားဖြင့်.
လူယွမ်ရှေးဟောင်းမြို့သည်ရပ်တန့်နေသည်, သမိုင်းနှင့်အချိန်၏သင်တန်းအားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, မှစ. 1600 ဘီစီ. ထိုကွောငျ့, သငျသညျမွို့ဘဝကိုဝိုငျးကြီးစွာသောမြို့တံခါးဝကြည့်ဖို့အထင်ကြီးလိမ့်မယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးပိုးလမ်းမကြီးကုန်သည်များလွန်သောအရပ်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်.
8. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအဆင်းလှဆုံးမြို့ဟောင်း: ပရာ့ဂ်
မြို့ဟောင်း, ဒေသခံတွေကလူသိများသည်, ပရာ့ဂ်မြို့ဟောင်း,9ရာစုကတည်းက visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်. သငျသညျဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာလှပသောရှေးခေတ်မြို့အားဖြင့်ဖမ်းဆီးလိမ့်မည်. ထိုကွောငျ့, သင်အခွင့်အလမ်းရလျှင်, အနည်းဆုံးတနင်္ဂနွေပရာ့ဂ်သို့သွားရောက်ပါ. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောအကြောင်းပြချက်များစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်.
အဟောင်းကိုသမိုင်းဝင်စင်တာကိုနေဆဲဖြစ်သည် မြို့လယ်ခေါင်, ဒီနေ့အထိ, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဘဝအားလုံးအတွက်နေရာဖြစ်သည်. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အားလုံးသည်ဗဟိုတွင်နာရီတိုင်းနက္ခတ္တဗေဒနာရီပတ်ပတ်လည်၌စုရုံးနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
9. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအဆင်းလှဆုံးမြို့ဟောင်း: အမ်စတာဒမ်
အမ်စတာဒမ်သည်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ ဥရောပမှာ, နှင့်အသေးဆုံးတစ်ခု. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နှစ်ရက်အတွင်းတစ်မြို့လုံးလမ်းလျှောက်နိုင်သည်. သို့သျောလညျး, အဘယ်အရာကိုခရီးသွား most ည့်အများဆုံးမသိသောဤလှပသောဒတ်ခ်ျမြို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်.
ထိုကွောငျ့, ၎င်း၏အရွယ်အစား၏ကြားမှ၌တည်၏, အမ်စတာဒမ်၏ရှေးဟောင်းမြို့တွင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ပါတ်လိုအပ်သည့်အထူးအစက်အပြောက်များစွာရှိသည်. ၁၃ ရာစုမြို့သည်ဝှက်ထားသောဝင်းဝင်းများစွာရှိသည်, ငြိမ်းချမ်း၏ကျွန်းများ, ဒါမှမဟုတ် Oude Kerk, အမ်စတာဒမ်ရှိရှေးအကျဆုံးအဆောက်အ ဦး, အနီရောင်ခရိုင်၌တည်၏. အကျဥ်းရုံးသည်, အမ်စတာဒမ်တွင်ရိုးရှင်းသောတူးမြောင်းလှေစီးယာဉ်များထက်သင်ပိုမိုမြင်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်း၏အဝေးထိန်းဇာတ်လမ်းများကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ပါက.
10. တရုတ်ပြည်ရှိပင်း Yao ရှေးဟောင်းမြို့
၎င်းကိုရှေးဟောင်းမြို့တော်ပင်း Yao တွင်စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမှာဗိသုကာပုံစံများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်. သငျသညျအဟောင်းကိုလမ်းများပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်အဖြစ်, အိမ်များ, ဘုရားကျောင်း, နှင့်မြို့ရိုးအပုံပြင်များကိုပြောပြလိမ့်မယ်5ရာစုနှစ်များစွာ. ၎င်းသည် Ping Yao ၏မြို့ဟောင်းကို ၁၄ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်.
သင်သမိုင်းကိုချစ်ပြီးတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းဆင်းလမ်းလျှောက်တစ်ခုမော်ကွန်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်လိမ့်မည်. သင်က Pingyao ဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုသွားမယ်, ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့မြင်ပါ.
ဤရှေးဟောင်းကျောက်မျက်ရထားဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်, Pingyao Gucheng မီးရထားဘူတာကိုသာသွားမယ်, မြို့တံခါးမှဘတ်စကားတစ်စီးစီးသွားသည်.
ဒီမှာ တွင် တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်ဖွယ်ရာနှင့်“ ကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်ရန်လှပသောရှေးဟောင်းမြို့ကြီး ၁၀ မြို့” သို့သင်မမေ့နိုင်သောနှင့်တိုးချဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ လှပသောရှေးဟောင်းမြို့ ၁၀ မြို့မှကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့လည်ပတ်ရန်” ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုသင်၏ဆိုဒ်ပေါ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မြို့ပြ တရုတ်ပြည် လှပသောနေရာများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ရထားခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား